प्राविधिक तहमा दरखास्तै परेन
– नारायण ढु्ङ्गाना
काठमाडौँ, कात्तिक ६ । लोकसेवा आयोगको एक सय बढी प्राविधिक पदमा दरखास्त नै पर्न सकेको छैन । गत वर्ष कूल विज्ञापनमध्ये १०१ विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दरखास्त नपरेका विज्ञापनमध्ये ६५ आन्तरिक प्रतियोगिताअन्तर्गतको छ । एउटा खुला प्रतियोगिता र ३५ समावेशी प्रतियोगिताका विज्ञापन छन् ।
अधिकांश प्राविधिक तहका विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमा पनि धेरै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विज्ञापनमा दरखास्त परेका छैनन् । “एक त जनशक्ति नभएर नै नपरेका हुन्, अर्काे स्वास्थ्य शिक्षा विषय नेपालमै पढाइ नहुँदा दरखास्त नआएका हुन सक्छन्”, आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार शिक्षाशास्त्र पढेकाबाट आएको दरखास्तले भने मान्यता नपाउँदा खाली हुन गएको हो । उक्त विषय भारतमा पढाइ हुन्छ । नेपालमा शिक्षा सङ्कायतर्फ स्वास्थ्यको पढाइ हुने गरे पनि मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा ऐनले मान्यता दिँदैन । दरखास्त नपरेकामध्ये ५८ विज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्रका छन् । अधिकांश माथिल्लो तहमा खाली छ ।
केही इञ्जिनीयर, टाइपिष्ट, अमिन, अपरेटर, पशु स्वास्थ्यलगायत पदका विज्ञापन खाली रहे । चिकित्सक क्षेत्रका नवौंँ र एघारौंँ तहका बढी छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गतका ६८ विज्ञापन र धनकुटा, हेटाँैडा, पोखरा र जुम्ला कार्यालयका तीन तीन विज्ञापनमा दरखास्त परेन ।
इलाम, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, दिपायल र भीमदत्तनगर कार्यालयका दुई दुई तथा खोटाङ र काठमाडाँै कार्यालयका चार चार एवं जलेश्वरको एक विज्ञापन खाली रहेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
एउटा मात्रै खुला प्रतियोगिता रहेको नवौंँ तहको कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदमा दरखास्त परेन । समावेशीतर्फ अपाङ्गतातर्फ तीन, महिलातर्फ ११, दलितर्फ ११, मधेसी र आदिवासी जनजाति तीन तीन विज्ञापनमा दरखास्त परेन । अन्य भने आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापन छन् ।
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले गत आर्थिक वर्ष कूल पाँच हजार ९७० पदका लागि एक हजार २०४ र समावेशी प्रतियोगितातर्फ एक हजार ८०७ विज्ञापन खुलाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसमा कूल पाँच लाख ६७ हजार ८५३ दरखास्त परेको थियो ।
अघिल्लो आवभन्दा गत वर्ष दरखास्तमा ३३ प्रतिशतले कमी आएको छ । सबैभन्दा बढी दरखास्त खरिदार पदमा एक लाख ४६ हजार ४७६ छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ बाट कूल दरखास्तको २५ प्रतिशत छ जसमा २१–२५ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशतले दरखास्त दिएका थिए ।
दरखास्त परेकामध्येबाट कूल सात हजार ७१८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको छ जसमा दुई हजार ४६५ (३२ प्रतिशत) महिला छन् । प्रदेश नं २ बाट सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत स्थायीका लागि सिफारिश भएका छन् । समावेशीतर्फ तीन हजार २४४ सिफारिश भए । गत आठ वर्षमा ४१ हजार ६८ स्थायी नियुक्तिमा सिफारिश भएका छन् । सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थातर्फ तीन लाख ६९ हजार ८५७ मध्ये लिखित परीक्षामा एक लाख ५९ हजार ४२६ सहभाग थिए । आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक ः मुख्यमन्त्री पोखरेल
व्यावसायिक कुखुरा, बाख्रा वा गाई भैंसीं पालन गर्दै हुनुहुन्छ ? अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस !
बाँझो जमीनमा कृषि उद्यम
नुवाकोटको शिवपुरीमा फल्यो १५ केजीको मुला, हेर्नुहोस गरे के हुंदो रहेनछ
हिमालयन एग्रो प्रोडक्टद्धारा एक सय ५१ प्रकारका चिया एउटै छानामुनि, सबै कृषकलाई समेट्ने
प्रदेश ३मा विवादमा पर्‍यो चीनबाट ४ हजार गाई ल्याउने निर्णय, मन्त्री भन्छन्- चाइनिज गाईले धेरै दूध दिन्छ
कमिशनकालागि मलमा जितुजी, यसरी हुन्छ जीटुजीमा घोटाला
नयाँ उद्योगमा रु एक अर्ब बढी लगानीको प्रस्ताव
अटोमोबाइल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
किसानलाई रु ६३ लाख अनुदान
सामुदायिक वनबाट ६० हजार रोजगारी
नार्कमा भन्दा किसानका खेतमा आधा उत्पादन
मरिच बिक्री नहुँदा किसान मारमा
१८ बर्ष पछि पुर्वसंसद लोहनी खेत रोपाँई गर्न गाँउ पसे, श्रावण ११ गते संघिय संसद खतिवडालाई बाउसे गर्ने निम्ता
नुवाकोटमा चारसय किसानलाई क्यान वितरण
एउटा बिरुवा रोपे रु २० दिइने
शुक्रबार बालाजु क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने
सुन्तलाको बिरुवा बेचेर पाँच लाख आम्दानी
मल कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही
पन्ध्र लाखसम्मको आयमा कृषकलाई कर छुट दिन माग